Ogaden News Agency (ONA) – JWXO ayaa War-saxaafadeed ku cambaareysay isku-dayga in Shidaalka Ogadenya La Soo Saaro Iyadoon La Xalin Qadiyadda Ogadenya
JWXO ayaa War-saxaafadeed ku cambaareysay isku-dayga in Shidaalka Ogadenya La Soo Saaro Iyadoon La Xalin Qadiyadda Ogadenya
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ayaa war-saxaafadeed kasoo saartay Shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo sheegtay inay baadhitaan iyo saarid ka bilaabi doonto ceelasha shidaalka Jeexdin.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ayaa war-saxaafadeedka ku bilowday in JWXO ay ka warhayaan isku dayga kooxdan Shiinaha ah iyo maamulkka Itobiya ay ku doonayaan inay kula baxaan Shidaalka iyo Gaaska ku jira Ogadenya ee Jeexdin iyadoo shacabka Ogadenya aanay raali uga ahayn arintaa. Waxay JWXO uga digtay shirkadahaa in aanay isku halaynin difaacidda ay ciidanka Itobiya u balan qaadeen maadaama aanay si dhab ah gacanta ugu haynin Itobiya dalka Ogadenya. Arintaa ayay JWXO ku tilmaantay inay la mid tahay ereyaduu qoray waaya hore nin la odhan jiray Alexander Pope.
Waxay JWXO war-saxaafadeedka ku xustay intii u dhexesay 1-10kii bishan Oktoobar in CWXO ku guulaysteen inay ka fuliyaan agaagraka xeryaha Jeexdin (Calub) Hawlgalo ay ku burburiyeen ugu yaraan laba guri oy ku gubeen 6 gawaadiga Ural-ka loo yaqaano iyadoo askar Itobiyaan ay ku dhinteen goobta qaar kalena ku dhaawacmeen.
Waxay JWXO si cadaan ah ugu qeexday Warsaxaafadeedka ay soo saartey in aanay ogolaanaynin in Shidaalka Ogadenya lala soo boxo iyadoon xal siyaasi ah laga gaadhin qadiyadda Ogadenya. Waxay JWXO cadaysay in aanay kasoo horjeedin shirkadaha caalamiga ah, laakiin ay tahay in la oogaado in xasuuq balaadhan uu ka socdo Ogadenya sidaa daraadeed qofkii ku taageera maaliyad xukunka wayaanaha ee Itobiya uu si toos ah ama si dadban uga qayb qaatay xasuuqa lagu hayo shacabka. Hadday doonayaan Shirkadaha caalamiga ah inay ka faa’idaystaan shidaalka Ogadenya waxaa la gudboon inay ka qayb qaataan sidii nabad waarta oo xuquuqda shacabka Ogadenya tixgalisa loo gaadhi lahaa.
Waxay jabhadda ku cadaysay Warsaxaafadeedka in dagaalkii Cobole wixii ka dambeeyay dadweyne aan ka yareyn 100kun oo qof laga barakiciyay dalkoodii oo xeryaha qaxootiga ee Kenya ay ku jiraan ama dalkooda gudiihiisa ku yihiin laaji. Waxaa intaa dheer in ugu yaraan 50kun ay xabsiyada ku jiraan, meesha Tobanaan Kun la dilay ama la la’yahay meel ay jiraan. Ciidanka Itobiya iyo maleesiyada sida Janjaweedka ay ugu shaqaysato ayaa ku haya dadweynaha xad-gudubyo ka dhan xuquuqda aadanaha iyo xasuuq baahsan, waxayna ciidamadaa ka helaan maalgalin dalka Shiinaha iyo meela kaleba.
Xad-gudubyadaa marka la fiiriyo, waa arin aanay ka fiirsanin oo caqli xumo ah inay Shiinaha ama shirkadaha kaleba yimaadaan Ogadenya oy ku talagalaan inay si nabadgalya ah kula baxaan shidaalka, iyadoo shacabka Ogadenya ay ku barooranayaan dadkooda la laynayo, oo cunaqabatayn naxariisdarra ah ay saaran tahay oo laga gooyay dhaq-dhaqaaqii baayacmushtarka iyo samafalkaba.
Ogadenya waa goob dagaal uu ka socdo, cunsurkii lasoo safta oo taageera siiya ciidanka TPLF waxay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya u aragtaa inuu qayb ka yahay dagaalka socda.
War-saxaafadeedkii Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya.